Murrashaxa KULMIYE iyo Wefti uu Hoggaaminayo oo Soo Dhaweyn Indhaha Soo Jiidatay Loogu Sameeyey Deegaanka Jiidali | Maalmahanews
Murrashaxa KULMIYE iyo Wefti uu Hoggaaminayo oo Soo Dhaweyn Indhaha Soo Jiidatay Loogu Sameeyey Deegaanka Jiidali
Jiidali (Warbaahinta Xisbiga KULMIYE)-Murrashaxa xisbiga KULMIYE Md, Muuse Biixi Cabdi iyo wefti xukuumadda iyo xisbiga katirsan oo uu hogaaminayo, ayaa si ballaadhan maanta loogu soo dhaweeyey deegaanka Jiidali oo dhinaca bari kaga beegan magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag.
Guddoomiyaha iyo weftigiisa oo ka kooban wasiirro, xidhibaanno, siyaasiyiin, salaadiin iyo xubno kale oo hawlo la xidhiidha wacyigelinta diiwaanta cod-bixiyayaasha, ayaa waxa goob fagaare ah ku qaabilay boqolaal katirsan shacabka ku dhaqan deegaanka Jiidaali oo ay hormood u yihiin maamulka xisbiga iyo xukuumadda ee deegaanka, kuwaas oo muujiyey taageerada buuxda ee ay u hayaan xisbiga KULMIYE iyo murrashaxiisa.
Cuqaal, waxgarad, siyaasiyiin iyo waxgarad kasoo jeeda deegaanka Jiidali oo halkaas ka hadlay, ayaa muujiyey sida ay u taageersan yihiin xisbiga KULMIYE iyo murrashaxiisa, iyaga oo shacabkana ku dhiirrigeliyey inay qaataan kaadhadhka codbixinta oo qaadashadoodu halkaas ka socoto.
Xubno wasiirro ah oo weftiga kamid ah iyo maamulka gobolka Sanaag oo halkaas ka hadlay, ayaa iyaguna bulshada deegaanka uga mahadceliyey sida milgaha leh ee ay usoo dhaweeyeen iyo sida aan qarsoodiga lahayn ee ay u muujiyeen taageerada ay u hayaan xisbiga KULMIYE.
Guddoomiyaha xisbiga KULMIIYE, ahna murrashax madaxweyne Md. Muuse Biixi Cabdi oo la hadlay dadweynaha deegaanka Jiidali, ayaa si xeeldheer uga sheekeeyey muhiimadda uu qaranka Somaliland u leeyahay deegaanka Jiidali iyo shakhsiyaadka waxtarka weyn ka geystay qaranka ee deegaankaas kasoo jeeda, kuwaas oo ay ay kamid ahaayeen Siyaasi Maxamed Saalax Nuur Fagadhe iyo Yaasiin Xaaji Nuur.